Chelsea ayaa kordhisay fursadaheeda inay u gaarto wareega 8 dhamaadka Champions League ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen Atletico Madrid wareega koowaad ee 16 jirkooda.
Ferguson, Mourinho, Guardiola: Waa kuma tababaraha?
Guushii Olivier Giroud ee qeybtii labaad ayaa ciyaarta ka dhigtay inay Atletico Madrid 1-0 kaga badiso Stamford Bridge ciyaartii ku celiska aheyd.
Labada koox ayaa qaab ciyaareed liita soo bandhigay qeybtii hore, gaar ahaan kooxda martida loo ahaa ee Atletico Madrid.
Chelsea ayaa sifiican kubbada u dhaaftay laakiin wax hanjabaad ah ma aysan sameynin halka Atletico ay ciyaartay kubbada caanka ah si ay u jahwareerto kooxaha ka soo horjeeda.
Atletico Madrid ayaa sameysay kaliya hal shuut qeybtii hore, markii ugu horeysay ee tan oo kale ay dhacdo 45 daqiiqo ee ugu horeysa kulan Champions League ah tan iyo xilli ciyaareedkii 2016-17.
Chelsea ayaa isku dayday 403 baas qaybtii hore ee ciyaarta, in kabadan 100 ayay ka badisay Atletico Madrid. Qeybtii hore ayaa sidoo kale la arkay jaalihii ugu dhaqsiyaha badnaa ee Champions League xilli ciyaareedkan iyadoo xiddiga Chelsea Mason Mount uu helay digniin 55-ilbiriqsi ah.
Chelsea ayaa hogaanka qabatay daqiiqadii 68-aad markii Olivier Giroud uu gool u badalay laad xor ah oo cajiib ah laakiin waxay ku qaadatay KOOXO KASTA inay xaqiijiso guusha.
Giroud ayaa Offside ahaa markii uu kubbada helay laakiin waxaa Offside ka ahaa Hermoso oo Giroud banaanka uga bixin.
Chelsea ayaa u qalantay guul ay ka gaarto Atletico Madrid, oo ciyaarta ku bilaabatay qaab difaac ah.
Bayern Munich ayaa 4-1 ku garaacday Lazio kulan ka dhacay Rome si ay ugu gudubto wareega 8 dhamaadka Champions League.
Sagaal daqiiqo ayay ku qaadatay Bayern Munich inay hogaanka ciyaarta la wareegto waxaana u dhaliyay Robert Lewandowski. Xiddiga reer Poland ayaa dhaliyay goolkiisii ​​72-aad ee tartanka champions League waxana uu dhaafay rikoodhka Raul ee mudada dheer.
Jamal Musiala ayaa labanlaabmay ka hor inta uuna Leroy Sane dhalin goolka 3-aad ka hor qaybtii hore ee ciyaarta isaga oo ciyaarta ka dhigay 3/0 ay Bayern hogaanka ku hayso.
Laba daqiiqo ka dib Bayern Munich ayaa dhalisay goolkeedii afaraad ee ciyaarta iyadoo ay uga mahadcelinayaan gool uu iska dhaliyay Lazio Francesco Acerbi laakiin Lazio ayaa la soo laabatay gool daqiiqadii 49aad iyadoo uu u dhaliyay Joaquin Correa.
Kooxda difaacaneysa koobkaan ee Bayern Munich ayaa haatan hal lug u jirta inay gaarto wareega 8-da guul weyn oo ay ka gaarto Lazio ka hor kulanka soo laabashada ah ee ka dhacaya Allianz Arena bilowga bisha soo socota.
5 Techniques to Totally Price Your Well being Appropriate Now,